Home Wararka Nin hubeysnaa oo dil ka geystay Jowhar
Nin hubeysnaa oo dil ka geystay Jowhar
Magaalada Jowhar ee xarunta Maamulka Hirshabeelle, waxaa lagu dilay Allah ha unaxariistee Wiil yar oo lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Sheekh Cismaan. Dilka wiilkaan ayaa la sheegay in uu ka dambeeyay Nin ku labisnaa dharka Ciidanka Dowladda kaas oo watay qoreyga AK47, isagoo wiilka ku dilay bartamaha Magaalada Jowhar.
Marxuumka la dilay ee Cabdiraxmaan waxaa ay da’diisu ahayd 14-jir, wuxuuna ka mid ahaa ardayda wax kabarata dugsiga Hoose dhexe ee Sheekh Xasan Barsane.
Sida ay goob joogayaal ay sheegeen dilka Wiilka yar ayaa timid, kadib markii Ninka hubeysan uu damac ka galay Mobile uu watay wiilka, ugu dambeyn uu wiilkii yaraa nafta dhaafiyay si uu teleefanka ugu qaato, isagoo markii dambe goobta uu dilka ka geystay ka baxday.
Previous articleGrowing risk of Somalia famine, as drought impact worsens
Next articleMuwaadiniin Soomaali ah oo laga soo badbaadiyay dagaalka dalka Ukraine
RW Khayre oo Wasaarada Maaliyada faray fududeenta qaraashka ka hortaga Fatahaada...
Go’aankii golaha wasiirada oo u muuqday mid lagu carqaladeynayo shirka Garowe